मरिसकेका मान्छेलार्इ पुनर्जीवन दिने भन्दै यसरी शवघरमा लाशहरू थुपार्न थालेपछि – PathivaraOnline
Home > समाज > मरिसकेका मान्छेलार्इ पुनर्जीवन दिने भन्दै यसरी शवघरमा लाशहरू थुपार्न थालेपछि
मरिसकेका मान्छेलार्इ पुनर्जीवन दिने भन्दै यसरी शवघरमा लाशहरू थुपार्न थालेपछि
admin September 24, 2018 समाज 0
के तपाईंलाई सधैं जिवित रहने इच्छा छ? माथिको तस्बिरमा देखाइएको कक्षमा रहेका १५४ जनामा यस्तो इच्छा छ । भविष्यमा प्रविधिको विकाससँगै पुनर्जीवन प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अरिजोनास्थित कम्पनी ‘अल्कोर्’ले आफ्ना सदस्यलाई मृत्युपछि उनीहरूको शरीरलाई सशुल्क ‘शीत संरक्षण’ गर्ने सुविधा दिएको छ। त्यहाँ शरीरहरू तरल नाइट्रोजनमा -२०० डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डार गरिन्छ । शीतविधि बाट गरिने यस्तो छ संरक्षण ।
संरक्षणको लागि तपाईंले दुई लाख डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । पैसा जोगाउनु छ भने तपाईं आफ्नो शिर मात्रै पनि त्यहाँ जमाउन सक्नुहुन्छ । अहिले यसरी संरक्षण गरिएका शवलाई ब्युँताउँने कुनै उपाय त छैन तर पछि त्यसो गर्न सकिन्छ भन्नेमा अल्कोर् आशावादी छ।
संरक्षणका लागि प्रयोग गरिएका विधिहरू शरीरलाई हानिबाट जोगाउन र पछि ब्युँताउँन पर्याप्त छैनन् कि भनेर केही वैज्ञानिकहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्।
बलात्कृत छोरीले आफूलाई डरत्रास देखाई ज्यानै मार्नेसम्मको धम्की दिई जबरजस्ती करणी गरेको अदालतमा बयान दिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सूचना अधिकृत रमेश भट्टराईले बताउनुभयो । आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको र केही दिनपछि पेट बढेको तथा महिनावारी नभएको कुरा बुबालाई सुनाएको बयानका क्रममा अदालतमा दिएको बयान सम्झँदै सूचना अधिकृत भट्टराईले भन्नुभयो ।
बुबाले गर्भवती छ÷छैन भनी पिसाब जचाउन लगेको, पिसाब जाँचपछि आफ्नो छोरी आफैँबाट गर्भवती भएको उनले थाहा पाए । उनी गर्भवती रहेको कुरा थाहा पाएपछि बच्नका लागि अनौठो योजना उनले बनाए । ‘उनले तिम्रो पेटमा पानी भरिएकाले पेट ठूलो भएको रहेछ तिमीलाई अस्पताल लगी जँचाउनुपर्दछ’ भने । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर रहेकाे छ ।
निर्मला हत्याकाण्डको दुई महिनाः खै कहाँ गयो प्रहरीकाे अनुसन्धान? यस्तो छ दुई महिनाको ‘घटनाक्रम’